Akụkọ - Gallium Nitride?
Triac Control voltaji stabilizer
Servo Motor Type voltaji stabilizer
Atọ adọ Industrial Servo Motor voltaji regulator
Single-adọ Industrial Servo Motor voltaji regulator
Kedu ihe bụ Gallium Nitride?
Gallium Nitride bụ ọnụọgụ abụọ III / V kpọmkwem bandgap semiconductor nke dabara nke ọma maka ndị transistors nwere ike ịrụ ọrụ na oke okpomọkụ. Kemgbe afọ ndị 1990, a na-ejikarị ya eme ihe na ọkụ ọkụ (LED). Gallium nitride na-enye ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke eji agụ diski na Blu-ray. Na mgbakwunye, a na-eji gallium nitride mee ihe na ngwaọrụ ike ọkụ, akụrụngwa RF, lasers, na photonics. N'ọdịnihu, anyị ga-ahụ GaN na teknụzụ ihe mmetụta.
Na 2006, ndị transistors GaN nke nwere nkwalite, nke ana - akpọ GaN FETs, bidoro rụpụta ya site na itolite GaN na oyi akwa AIN nke silikion ọkọlọtọ na - eji ihe eji eme ihe na mmiri (MOCVD). Ihe mkpuchi AIN na-eme dị ka nchekwa n'etiti mkpụrụ na GaN.
Usoro ohuru a mere ka ndi transistors gallium nitride meputa ihe n'otu ulo oru di ugbua dika silicon, jiri ihe omuma ihe. Site na iji a mara usoro, nke a na-enye ohere maka yiri, ala n'ichepụta akwụ ụgwọ na-ebelata ihe mgbochi doro maka nta transistors na ukwuu mma arụmọrụ.
Iji kọwakwuoro, ihe niile semiconductor nwere ihe a na-akpọ bandgap. Nke a bụ usoro ike n'ime ihe siri ike ebe ọnweghị electron nwere ike ịdị. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ihe jikọrọ bandgap na otú ihe siri ike ga-esi na-eduzi ọkụ eletrik. Gallium nitride nwere 3.ga eV bandgap, ma e jiri ya tụnyere silicon's 1.12 eV bandgap. Gallium nitride nke sara mbara karịa na-egosi na ọ nwere ike ịkwagide voltages dị elu na okpomọkụ dị elu karịa silicone MOSFET. Bandgap a sara mbara na-eme ka gallium nitride tinye n'ọrụ na optoelectronic nwere ike dị elu na ngwa ngwa dị elu.
Ikike ịrụ ọrụ na oke okpomọkụ na voltages karịa gallium arsenide (GaAs) transistors na-emekwa ka gallium nitride ezigbo ike amplifiers maka microwave na terahertz (ThZ) ngwaọrụ, dị ka onyonyo na ịchọpụta, ahịa ọdịnihu a kpọtụrụ aha n'elu. GaN teknụzụ dị ebe a ma ọ na-ekwe nkwa ime ka ihe niile ka mma.
Post oge: Ọkt-14-2020
Staba Electric Co., Ltd. Okwuchi
Mba 87, Dongfu 4th ụzọ, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China